I Holland | Hoyga | Tabletsting Science: utions Xal u helista kiniiniga Sare
Ku saabsan I Holland
Feer & Dhimasho
Kharashyada orodka badan
Xaashiyaha & Xaashida
Daraasadaha Kiiska & Maqaallada
Quote Foomamka Codsiga
I Holland Covid-19 Bayaanka
Annaga oo ah bixiye muhiim u ah warshadaha dawooyinka adduunka, waxaan rabnay inaan dib u xaqiijinno macaamiisheenna iyo shuraakadayada inaan 100% ka go'an nahay inaan wax walba oo awooddeena ah aan ku taageerno ganacsigaaga iyo la-dagaallanka COVID-19.
Waan ka warqabnaa oo ku faanaa doorka muhiimka ah ee aan ka ciyaarnay xilliyadan adag. Waxaan aad ugu mahadcelineynaa shaqaalaheena, iyo asxaabteena wershadaha dawooyinka dhamaan shaqooyinka ay qabanayaan si ay u taageeraan daaweynta cudurkaan.
Fadlan halkaan riix si aad u aragto qoraalkeena oo dhan.
Ku soo dhowow I Holland
Halkan I Holland waxaan sameynaynay feer waxaanna dhimaneynaa mudo kabadan 75 sano inaga oo naga dhigeynaa soo saaraha qalabka isku buufinta kaniiniga ugu dheer aduunka. Waxa inaga duwanaan kara kuwa kale ee soo saara qalabka wax lagu qoro ayaa ah qaabkeena gaarka ah ee naqshadeynta, horumarinta iyo gaarsiinta mashruucaaga shaqsiyeed. Waxaan kula shaqeyn doonnaa dhammaan heerarka laga bilaabo fikradda bilowga ah ee kiniiniyada cusub illaa cilad-saarista alaabooyinka jira. Mid kasta oo feer iyo dhinta ah oo aan soosaarno waa iska hadal. Qalabka kuma siino keydka.
Himiladayada ugu dambaysa ayaa ah inaan kordhinno wax soo saarkaaga oo aan hagaajino waxqabadka guud ee geedkaaga. Waxaan ku gaarnaa tan;
1. Khabiirkeena design koox kaa caawineysa sameynta kiniin qancinaya qiimahaaga sumadda laakiin yareynaya arrimaha wax soo saarka.
2.Haweenka saxda ah faahfaahinta kiniinka sida adkaanta, culayska iyo dhumucda ayaa la gaadhaa oo la ilaaliyaa.
3. Yaraynta waqtigaaga shaqada adigoo tirtiraya dhibaatooyinka wax soo saarka caadiga ah - dhejinta, xirashada iyo dahaadhka dadka kale.
4. Yaraynta qiimahaaga kiniin kasta oo leh qalab dheer iyo dayactirka aaladda xirfadeed.
5. Wadaagista aqoonteenna iyo aqoonteenna si ballaaran tababar iyo taageero farsamo.
Waxaas oo dhan, marka lagu daro xawaaraha jawaabteena, waxay keenaysaa khibrad adeeg macmiil aan laqaban karin gudaha warshadeena.
Cibaado Wanaagsan Tartan Qiimo Badan
Waa deg deg oo fudud in baaritaan la sameeyo. Guji xiriirka hoose si aad u bilowdo sameynta kiniinno ka wanaagsan maanta.
KA HELI KARO
Farmashiyaha® kaladuwanaashaha maamulayaasha waxay gaaraan isku-dheelitirnaanta ugu habboon ee astaamaha. Tani waxay bixisaa cimri dherer iyo wax soo saar, waxay siineysaa wax qabad guul leh qalabaynta xakameynta kiniinka.
Farmadeena® waa daaweyn kala duwan iyo jaakado kor u qaada waxqabadka FarmaGrade® aaladda birta ah ee feeraha oo dhinta.
At I Holland waxaan aqoonsan nahay muhiimada ay leedahay cilmi baarista iyo la shaqeynta macaamiisha iyo wada-hawlgalayaasha sayniska si isku mid ah. Tani waxay caawineysaa horumarinta wax soo saarka cusub, adag oo tartan leh.
Waxaan Holland leeyahay in kabadan 70 sano oo waayo aragnimo ah xalinta dhibaatooyinka wax soo saarka kiniinka. Waxaan aaminsanahay inaan si iskaashi ah ula shaqeyno macaamiisheenna si aan u gudubno aqoonteenna.
Warar & Dhacdooyin Dhawaan
Waxaan Holland ku dhawaaqayaa taxane webinar cusub oo ku saabsan dayactirka qalabka 2021
Sir maahan! Qalabka si fiican loo ilaaliyo oo si taxaddar leh loo keydiyo ayaa lacag kaa dhigaya. Ku hagaaji soo noqoshadaada maalgashiga taxanahan websaydhka ah halkaas oo aan ku sharxi doonno sida saxda ah sababta taasi run u tahay. In la qaban doono Khamiista ugu dambeysa ee bil kasta Febraayo - Agoosto 2021.
Guul weyn oo loogu talagalay koorsada cillad bixinta khadka tooska ah ee ugu horreysa - Nofeembar 2020
I Holland waxay martigalisay koorsadeenii ugu horeysay ee Cilad-bixinta Dhibaatooyinka Tablet-ka bishii Nofeembar 2020. Ilaalinta qof walba nabadgelyadiisa iyadoo aan la qaadin khatarta safarka. Guusha munaasabada awgeed, aniga Holland waxaan sii wadi doonaa martigalinta koorsooyinka intarnetka badankood si joogto ah.
Taxane Webinar BILAASH ah - Dayactirka Qalabka - Saliidaha & Dukaanka - 29ka Luulyo 2021
Sir maahan! Qalabka si fiican loo ilaaliyo oo si taxaddar leh loo keydiyo ayaa lacag kaa dhigaya. Ku hagaaji soo noqoshadaada maalgashiga taxanahan websaydhka ah halkaas oo aan ku sharxi doonno sida saxda ah sababta taasi run u tahay.
Marka hore, nadiifinta qalabkaaga!
Linkedin-ku Facebook-f Twitter Youtube
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | Right Xuquuqda daabacaadda I Holland Ltd 2019